Doorashooyinka - Sabahionline.com
Khubaro dastuur oo ka digay ololaha loogu jiro afti laga qaado Kenya
2014-10-01 Okoa Kenya iyo Golaha Guddoomiyayaasha Gobollada Kenya ayaa u ololaynaya in isbaddal lagu sameeyo dastuurka, laakiin khubaradu waxay leeyihiin in dhibaatadu ka taagan yahay hoggaan xumo ee ayan aheeyn cillado dasatuuri ah.
Komishanka doorashooyinka Somaliland oo aad loo dhaliilayo xilli mucaaradkuna ka digayo in dib loo dhigo doorashada
2014-08-19 Xisbiyada mucaaradka ayaa ku baaqay in la magacaabo maamul ku meel-gaar ah haddii aan doorashooyinka la qaban sannadka dambe, laakiin xukuumaddu waxay sheegaysaa inay ku joogto qorsheheedii ahaa in la diiwaan-galiyo cod-bixiyayaasha kama dambeeys dhammaadka sannadkan.
Tansaaniyaanka oo ka walaacsan sida loo wado diiwaan-gelinta cusub ee astaamaha jismiyeed ee cod-bixiyeyaasha
2014-07-04 Xildhibaannada iyo muwaadniinta ayaa sheegaya in daalacnaan iyo ka fiirsasho taxaddar leh loo baahan yahay inta aysan xukuumaddu bilaabin ololaha diiwaan-gelinta oo la isugu diyaarinayo doorashada guud ee sannadka dambe.
Wasiir sheegay in Higsiga 2016-ka ee Soomaaliya uu yahay mudnaanta ugu sarreeysa ee xukuumadda
2014-04-22 Wasiirka Garsoorka iyo Arrimaha Dastuurka Faarax Sheekh Cabdulqaadir Maxamed ayaa sheegay in xukuumaddu diiradda saarayso qorshaha horumarineed ee Soomaaliya iyo doorashooyinka muddeeysan ee 2016-ka.
Xildhibaannada Puntland oo Ra'iisul Wasaarihii hore Cali u doortay madaxweynaha gobolka
2014-01-08 Cabdiweli Maxamed Cali ayaa ninkii xilka hayay ee Madaxweyne Faroole kaga guulaystay hal cod oo kaliya wareeggii saddexaad ee codaynta.
Amniga oo la adkeeyay iyada oo Puntland isu diyaarinayso doorashada madaxweynaha gobolka
2014-01-07 Ciidamada ammaanka ayaa waddooyinka ka muuqda iyaga oo roondo ah oo baadhitaan ku samaynaya baabuurta magaalada Garoowe oo dhan ka hor inta aan la gaadhin doorashada gobolka ee aadka loo sugayo oo qabsoomaysa 8-da January.
Degganaan cabsi leh ayaa Jabuuti ka jirta inta aan la gaadhin maxkamadeynta mucaaradka
2013-03-08 Mudaaharaadyo looga dacwoonayay khiyaano lagu sameeyay doorashada ayaa ka joogsadey Jabuuti, laakiin maxkamadda u soo socota madaxda mucaaradka ayaa laga yaabaa inay sababto mudaaharaadyo dheeraad ah.
2013-03-05 Codbixiyeyaashii badnaa oo u soo baxay codeeynta ayaa keenay safaf dhaa-dheer iyo isku-dhex yaac ka dhacay goobaha codeeynta qaarkood, laakiin codbixiyayaashu waxay sheegeen in ka qeyb qaadashada doorashada ay u qalantay dhibka ay la kulmeen.
2013-03-04 Cod-bixiyeyaasha ayaa safaf uu dhererkoodu dhan yahay boqolaal mitir oo ballacooduna yahay dhowr qof u istaagay goobaha lagu codeeyo ee waddanka si ay uga qeyb galaan doorashadan taariikhiga ah.
2013-02-28 Karua waxay sheegtay in arrimaha ugu weyn ee Kenya la isku haysto jawaabahooda laga heli karo dastuurkii la aqbalay 2010-kii, fulintiisa deg-degta ah ee buuxdana waxay noqon doontaa saldhigga qorshaheeda siyaasadeed.
2013-02-28 Siyaasiyiinta haweenka ah ayaa sheegaya in inta badan laga niyad jabiyo u tartamidda xafiisyada dowladda, iyagoo wajaha cabsi galin nafsiyan iyo mid jir ahaaneed, waxa ayna bilayska ka codsadeen in ay adkeeyaan ammaankooda.
2013-02-27 Iyada oo maalintii doorashada ay dhawr maalmood ka hadhsan yihiin, ayaa qaar ololayaasha siyaasadda ka mid ah ay rabaan in ay dadka ku soo jiitaan lacag.
Dadka naafada ah oo dhibaatooyin dheeri ah kala kulmaya siyaasadda Kenya
2013-02-27 Dadka naafada ah ayaa sheegaya in inta badan ay iloobeen musharixiinta, iyagoonba aan loo arag in ay noqon karaan tartamayaal macne sameeya.
2013-02-26 Musharraxiinta madaxweynenimada Kenya ayaa ka jawaabay su'aalo ku saabsan anshaxa, dhaqaalaha, dhulka iyo musuq-maasuqa iyadoo ay muwaadiniintu doodda gabi ahaan ka muujiyeen dareenno kala duwan.
2013-02-24 Ka dib markii ay natiijooyinkii horudhaca ahaa sheegeen in xisibiga talada haya ay 2% ku horreeyaan tirinta codadka, ayay hoggaamiyeyaasha mucaaradku ku andacoodeen in codadka lagu shubtay waxayna ku tilmaameen inay tahay "wax lagu maadsado".
2013-02-22 Culimada Kenya ayaa qaba in murashaxiinta ay la hadlaan dadka Kenya ee aan lahayn aqoonta rasmiga ah si mararkaa dhammaan cod-bixayaashu u qaataan go'aan ku dhisan xog-ogaalnimo.
2013-02-18 Dida, oo ah musharaxa madaxwaynanimada ee Isbahaysiga Isbadalka Dhabta ah, ayaa sheegaya in uu doonayo in uu dadka siiyo waxbarsho bilaash ah, dhaqaalahana adkeeyo, xaalada ammaanka ee Kenyana uu hagaajiyo.
2013-02-15 Siddeed murashax ayaa ku hardamaya mansabka siyaasadeed ee ugu sarreeya Kenya iyaga oo gali doona tartan lagu go'aan qaadan doono 4-ta March iyada oo ay suuragal tahayna in lagalo doorsho kama dambaysa ah oo dhacda 11-ka April.
Mucaaradka Jabuuti oo xukuumadda ku eedeeyay faafreebid
2013-02-13 Midowga Aqlabiyadda Madaxtooyada ayaa abuuray duruufo aan caddaalad sameeynayn iyagoo akhristayaasha ka xiray wabseedyada mucaaradka, sida ay sheegeen hoggaamiyayaasha mucaaradka.
2013-02-12 Doodda ayaa cod-bixiyayaasha siinaysa fursad ah in ay si toos ah u maqlaan sida ay siddeedda murasahx ugu kala duwan yihiin qaddiyado muhiim u ah ka hor doorashooyinka 4-ta March.
2013-02-11 Digniinta ammaanka loolama jeedo in ay joojiso dhaq-dhaqaaqa ololaha, laakiin ujeedadu waa in la xaqiijiyo doorasho nabad iyo ammaan ah oo dhamaan Kenyaanku ay ka qayb galaan, madaxda ayaa sidaas leh.
2013-02-08 Hay'ada Ilaalada Xuquuqda Insaanka ayaa sheegaysa in ku guul darraysiga ay dawlada Kenya ku guul darraysatay wax ka qabadka ku xad gudubka xuquuqda inasaanka ee hadda socota horayna u dhacday ay kordhisay khilaafka soo koraya ee waddanka ka jira.
2013-01-24 Hannaanka cusub ee doorashooyinka ayay dadka reer Kenya ugu codeyn doonaan lix jago, balse qaar badan ayaa sheegaya inay dareemayaan in aanay diyaarsaneyn sababta oo ah war baahintu waxay xoogga saartay doorashada madaxtinimada.
Kooxaha mucaaradka ah ee Jabuuti oo u tartami doona doorashooyinka baarlamaanka
2013-01-23 Ka dib markii ay qaaddaceen doorashooyinkii 2008-dii, gaashaanbuurta cusub ee mucaaradka ayaa ku dhaartay inay baarlamaanka ka yeelan doonaan wakiillo, gaar ahaan xilligan oo ay Jabuuti ka guurayso nidaamka liiska aqlabiyadda ayna u baddalanayso qayb saami ah.
Dadka reer Tanaaniya oo dhiirri-galinaya in musharixiinta lagu soo magacaabo habka doorashooyinka horu dhaca ah
2012-12-10 Qabashada doorashooyinka horu dhaca ah ayaa dadka u ogolaan doona in ay kaalin weyn ku yeeshaan naqshadeynta siyaasadda guud ee dalka, waxa ayna xisbiyada siyaasadda siin doontaa fursad lagu barto ka hor doorashada, sida falanqeeyayaashu leeyihiin.
Hab-dhaqanka ciidamada ammaanka oo walaac abuuray ka hor doorashooyinka
2012-11-29 Rabshadihii dhowaan ka dhacay qaybo ka tirsan dalka ayaa cabsi iyo walwal ka dhex abuuray dadka gudaha iyadoo Kenya ay ku sii siqeeyso doorashooyinka guud ee soo socda.
2012-11-27 Dad ka soo jeeda degaanka ayaa u saf-raya baadiyaha si ay Kenyaanka ugu dhiirrigeliyaan inay is diiwaan-geliyaan si ay codkooda u dhiibtaan doorashooyinka March 2013-ka.
2012-11-20 Horumarkii ay dhawaan gaadheen jaamacadaha Somaliland ayaa korodhiyay tirada qalin jabiyayaasha si fiican u tababaran, laakiin la'aanta miisaan waxbarasho ayaa wali sababaya dhibaatooyin.
2012-11-19 Iyada oo doorashadii guud ee waddanku soo dhawaatay, ayay Kenyaanku sheegayaan in ay siyaasiyiinta ka doonayaan in ay xoogga saaraan qaddiyadaha ay kamidka yihiin dhaqaalaha iyo daryeelka caafimaadka, oo aan xoogga la saarin qabyaalada.
2012-11-02 Todaba wakiil ayaa ku midoobay in ay abuuraan urur wax kala saarid oo lagu hubinayo in musharaxiintu ay anshax fiican yihiin si ay xafiis dawlo u qabtaan.
2012-10-25 Shuruurcda cusub ayaa siyaasiyiinta khasab uga dhigaya inay farriimaha olole iyo xayaysiimaha soo gudbiyaan si baaris loo mariyo ugu yaraan laba maalmood ka hor inta aan la dirin ama aan loo baahin bulshada.
Kenya oo olole ku qaaday yaraynta rabshadaha Golaha Jammhuuriga Mombasa maadaama ay doorashadii soo dhowaatay
2012-10-18 Xubnaha golahu way ka joogi karaan codaynta balse looma oggolaanayo inay cabsiiyaan ama waxyeelaan shacabka, masuuliyiinta ayaa leh.
Soomaalida oo qiimaynaya madaxweynaha cusub iyo dariiqa hor yaala
2012-09-19 Sabahi oo waraysatay muwaadiniin dhowr ah si loo qiimeeyo fikradaha ay ka haystaan madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud
2012-09-17 Kala wareega awooda ee sida nabada ah awooda loogu wareejiyay madaxa sida dimuuqiraadiyad ah loo soo doortay waxy ku tusinaysa in Soomaalidu bog cusub oo taariikhdooda ah ay gadiyeen, indha- indheeyaal ayaa sidaas leh.
2012-09-12 Iyadoo hoggaamiyayaasha maxalliga iyo kuwa caalamiga ah ay ugu hambalyaynayaan Xasan Sheekh Maxamuud guusha uu gaaray, ayaa al-Shabaab isku dayday in ay dilaan madaxweyanaha cusub laba maalin kadib doorashadiisa.
2012-09-11 Xasan Sheekh Maxamuud, oo ah aqoonyahan iyo dhaq dhaqqaaqe arimaha bulshada ah, ayaa kaga guulaystay Madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed wareeggii labaad ee codeynta.
Dadweynaha Muqdisho oo nadiifinaya waddooyinka Muqdisho iyada oo la isu diyaarinayo doorashada madaxweynanimada
2012-09-09 Muwaadiniinta ayaa sheegaya in ay nadiidinayaan magaalada oo ay gurayaan qashinka taasoo ka dhigan farxad iyo rajo ay ka qabaan in ay helaan mustaqbal wanaagsan
2012-08-30 Fanaaniinta iyo muusikiistayaasha maxaliga ah ayaa sheegaya in ammaanka oo wanaagsanaaday kadib markii al-Shabaab Muqdisho laga saaray ay fankii dib u soo noolaysay.
2012-08-29 Xubnaha Baarlamanka cusub ee Soomaaliya oo dhawaan la doortay ayaa Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari u doortay afhayeenka baarlamaanka.
2012-08-17 In ka badan 35 musharax ayaa u tartamaya madaxwaynanimada iyadoo doorashdii Agoosto 20-keediina ay soo dhawaatay iyo iyadoo marxaladii ku meel gaadhku ay dhamaanayso.
2012-08-17 Sabahi ayaa soo gudbinaysa taariikh nololeedka xubnaha ugu muhiimsan ee isku haya madaxweynanimada Soomaaliya.
2012-08-09 Dowladda ayaa dadajinaysa in ay Guddiga Madaxa-bannaan ee Doorashooyinka Xudduudaha u soo iibiso mashiinnada aqoonsada sifaadka dadka ee loo isticmaalo diiwaan-galinta codeeyayaasha, sdia ay sheegayaan saraakhiisu.
Somaliland ayaa qabatay codayn jilitaan ah si ay u tijaabiso hannaanka doorashada.
2012-05-25 Saraakiisha guddoonka doorashada ayaa sheegay in goobaha codaynta ka hor ay muwaaddiniintu u baahanyihiin waxbarasho habka codaynta oo dheeraad ah.
2012-02-17 Tirrada haweenka ka tirsan dawladda Somaliland ayaa sii kordhaya, waxaana suurta gal ah inuu gaaro heer aan horre loo arag marka lagu daro 25% ee ah saamiga uu meel-mariyay barlamaanku.
2012-01-09 Iyagoo cashar ka qaadanaya 2007-dii ayaa waxa jira siyaasado cusub oo lagu raadinayo doorasho ku dhacda caddaalad iyo awoodda oo si nabad ah loola kaa wareego